लोक गायक भगवान भण्डारी दाइसंगको भेट… | Prakash Saput
लोक गायक भगवान भण्डारी दाइसंगको भेट…
हाम्रो गाउबाट करिब डेड घण्टा हिडेर पुगिने छिमेकि गाउ तंग्राम ठुलो गाउमा मेला लागेको थियो । कक्षा ८/९ तिर स्कुलकै निलो पाईन्टमा रु १० को नया नोट हालेर हाम फ़ाल्दै पुगियो ठुलोगाउ । मलाई धुमिल याद छ सोहि गाउका गायक खेम पुन दाई ( हाल अमेरिका ) र हाम्रा गाउका नरु बिश्वकर्मा दाईको टिम दोहोरीको फाईनल राउण्ड तिर भिड्दै थिए । मेरा बा टुक्का हानाहान । भाका थियो “फुलमा भमरा ।” नया गित ख़ुब चलेको । मलाई दोहोरी ले छोयो । घर फर्किदा त्यहि भाकामा गाउदै आइयो । । खासमा तिनताका मलाई साहित्यमा बढि रुचि थियो तर त्यसपछि मलाई दोहोरीमा रस पस्यो ।
१० पास पछि गाउ छोडियो । प्रतियोगितामा गाउन शुरु गरे । खैरीनीमा गेट, फुलमा भमरा, बनमा काडा छ, ससुरालीमा जस्ता भाकाहरु फाईनल पुग्दा सम्म २/२ पटक रिपिट हुन्थे । आज पनि लाईभ दोहोरी हुदा पहिलो रोजाईका गितहरु हुन यि । यस्ता कालजयि गितका गायक सर्जक अग्रज आदर्णिय भगवान भण्डारी दाई संग आज पहिलो पटक भेट भयो । पुगनपुग १ घण्डाको बसाईमा लोकदोहोरीको त्यो स्वर्णिम समय र अवस्थाका धेरै कुराहरु थाहा पाउने मौका पाए । उसैपनी हेण्डसम भगवान दाई तिनताका नै फेशनेबल । महिला फ्यानहरु धेरै । हामी केहि बेर दाईको त्यो समय सम्झेर हास्यौ । कुनै जिज्ञासु बालकले आफ्नो बाबुलाई सोधेको जसरी मैले धेरै प्रश्नहरु दाईलाई सोधे ।
– पहिलो गित
– दुबै किन जानु भो, फेरी किन फर्किनु भयो !
– ब्याक टु ब्याक हिट हुदाको महशुस र प्रेसर
– तिनताकाका तपाईका दावली, सांगितिक माहोल ?
– अनि फेरीअचानक अमेरिका ??
दाईलाई हैरान नै बनाए मैले सबै प्रसंगमा ईतिहास लुकेको छ । कोठि गालैमा लाईभ रेकर्ड गर्दा को अनुभव, बिमा कुमारी दिदिलाई दिएको पहिलो पारिस्रमिक, ४० हज़ार क्यासेट एकै पटक साईन गर्दाको मज़ा । थुप्रै थुप्रै दाईको त्यो गरिमामय ईतिहास र अमर सिर्जनाहरु प्रति सम्मान । संगै आफ्नो समयका थुप्रै अनुज भाईहरुलाई दाईले बाटो देखाउनु पनि भएको छ । कसैलाई सिर्जना दिएर, कसैलाई हौसला दिएर, कसैलाई आफैले लगाएको दौरा दिएर । ति मध्य धेरै सफल भए जो अहिले पनि सक्रिय छन ।दाईलाई गौरब र खुसी लाग्छ रे । तर हाम्रो समयका एक
अग्रज छन जो पहुँच मा निकै माथी छन, एउटा सफल र गर्भिलो सांगितिक उचाई र ईतिहास पनि छ । हामीले सम्मान पनि दिएकै छौ । तर सोच यस्तो छकि आफ्नो स्थानबाट तल झरेर हामी संग छाती नाप्न आउनु हुन्छ । हौसला र प्रोत्साहन त परै जावस लोकदोहोरीमा कुनै नया भाईको सम्भावना देख्नु भयो भने यस्सो मौका पारेर निरुत्साहित गर्न थाल्नु हुन्छ । गित गाओस तर हिट नहोस, मेरै वरिपरि मेरै जयजयकारमा भुलोस भन्ने उहाको शुभेच्छा छ । हाम्रो सिर्जनाले कुनै पुरस्कार पाउदा उहालाई शर्म लाग्छ । उहा कोसिस त गर्नु हुन्छ कि कोहि नवाओस तर सक्नुहुन्न/ जान्नुहुन्न विचरा । किनकि समयलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
पहिलो भेटमै भगवान दाईले म प्रति देखाएको माया र हार्दिकता देख्दा यस्तो लाग्यो दाईकै सिर्जना नि शुल्क पाएर स्थापित भएका ति अग्रजले हामीलाई गरेको व्यवहार जस्तै भगवान दाईले त्यो बेला उहालाई देखाएको भए..??????
अरुको गुनले सफल हुनेहरुले अरुलाई पनि गुण गर्न पर्छ । कमसेकम बैगुन नगरे हुने । मनमा हरि भएपो !
समय भएको भए अझै धेरै बेर बस्न मन थियो । मसंग अझै धेरै जिज्ञासाहरु थिए दाई । एउटा ल्यादरको कालो ज्याकेट र कालो चस्मा तपाईलाई उपहार दिएर फुल फिगर फोटो खिच्ने मन थियो । किनकि तपाई आज पनि उत्तिकै हेण्डसम हुनुहुन्छ । उतिबेलैको एउटा ट्याग लाईन सुनेको हिरो जस्तो लोकगायक भगवान भण्डारी । रहर पुरा गर्छु कुनै दिन । तर पनि म खुसी छु कि दाई संग भेट भयो ।
अब अर्को एउटा रहर छ । अग्रज गायिका सिर्जना बिरहि थापा दिदि संग प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने । उतै अमेरीका तिर हुनुहुन्छ क्यारे ! तपाई फर्किनु भयो भने भाईको सम्मान र रहर सुनाईदिनु है भगवान दाई ।
व्यस्त दोहोरी गायक प्रकाश सपुत भ्रमण वर्ष २०२० को सद्भावना दूतमा नियुक्त
Singer Saput Appointed VNY 2020 Goodwill Ambassador
Tourists goodwill ambassador of Gandaki province: Prakash Saput
Prakash Saput has been awarded by Radio Kantipur National award 2k76 : Public Choice Award